Spotify Banye mbipụta
Spotify bụ a amamiihe music nkwanye n'elu ikpo okwu na hụrụ ụfọdụ oké ihe ịga nke ọma na mmepe na-adịbeghị anya. Ịbụ onye na obere ngwa na narị ole na ole ọrụ na 2010 ruo ihe karịrị 75 nde arụsi ọrụ ike ọrụ na 2015. The netwọk eguzobewo onwe ya dị ka a ike mpi ẹdude gụgharia ọrụ na ngwa. Ma, ọ bụghị ihe niile nwere ike ịbụ zuru okè. Mgbe ọ na-abịa arụmọrụ, Spotify napụtara ya kasị mma ma na ya mgbe evolving nchekwa data ma rụọ ọrụ ọrụ tinyere ya ịgbasa netwọk, ụfọdụ oru mbipụta na-na-eche ihu site ọrụ. Ụfọdụ n'ime ndị a okwu na-agụnye nbanye nsogbu. Na-esonụ ederede anyị ga-egosi ụfọdụ Ugboro nsogbu ma na-atụle ha ngwọta mma gị na ahụmahụ na Spotify na nke mere na ị pụrụ ịnụ ụtọ music na ya kacha mma.
Echefuola profaịlụ niile
E nwere otu ebe ọrụ ndị na-sonyeere Spotify tupu 22 September 2011, furu efu nile ha nkọwa, listi ọkpụkpọ na ọrụ ndị ọzọ. Ọzọkwa, e nwere ndị ọrụ na-sonyeere netwọk na iji ha Facebook akaụntụ mgbe na-eji otu na aha njirimara na akaụntụ. Ma, nke a kere ụfọdụ mbipụta n'ihi na ndị a ọrụ. Ndị nwere memberships na-eche ihu nsogbu na otú ihe ngwọta maka nsogbu a bụ ejikọta abụọ ndị a akaụntụ. Iji mee nke a:
1. logout na akaụntụ gị usoro na mgbe ahụ nbanye na iji aha njirimara na paswọọdụ.
2. Gaa mmasị  mgbe ahụ na-elekọta mmadụ netwọk (edit menu na nri) Nke a ga-ejikọta ihe ndekọ na idozi ngwọju-anya ọbụla.
Ọ bụrụ na ị nọwo na-eji gị Facebook akaụntụ maka ọrụ mgbe ahụ ị bụ obere yiri ka na-eche nsogbu na-echefu paswọọdụ, n'ihi na ọ ga-ejikọta akaụntụ gị ozugbo na Facebook ọrụ na ị nwere ike tọgharịa paswọọdụ gị. N'ihi na ndị na-eji akaụntụ email ga-eso ụfọdụ nzọụkwụ, gaa na-echefu paswọọdụ njikọ na Tinye aha njirimara gị. Ugbu a nrụpụta njikọ ga-eziga gị ụghalaahia mail na akaụntụ, nweta na na mgbe ahụ site na ị ga-ibugharị nrụpụta paswọọdụ njikọ. Mgbe ụfọdụ ị nwere ike iji nyochaa njirimara gị ugwo nkọwa dị ka nke ọma n'ihi na nkwenye.
Ụfọdụ ndị ọzọ nsogbu:
1. Ndetuta egwu ọkpụkpọ adịghị mmekọrịta na ngwaọrụ (iOS na Android ngwaọrụ)
Nsogbu a nwere ike na-ihu ruru ụfọdụ njikọ mmejọ ma ọ bụ mgbe ụfọdụ usoro na-egbu oge. Iji dozie a logout site na akaụntụ gị na-elele njikọ data. Nbanye na na akaụntụ na ume na listi ọkpụkpọ. Ọ bụrụ na nke a adịghị aka reinstall ngwa.
2.-anọghị n'ịntanetị ọrụ adịghị arụ ọrụ (iOS na gam akporo ọrụ na adịchaghị akaụntụ)
The offline ọrụ dị ka adịchaghị na akaụntụ ọrụ. Ya mere, biko hụ i ruo eru maka ọrụ ahụ. Ugbu a ma ọ bụrụ na ọrụ na-adịghị arụ ọrụ kwesịrị ekwesị, biko mmekọrịta na egwu na ngwaọrụ ka isi iyi. Ọzọkwa ngwaọrụ achọ ezuru ohere nchekwa ịzọpụta data faịlụ maka offline ohere. The kacha nta na-atụ aro ohere bụ 1GB. N'ihi na ezigbo ịrụ ọrụ ịnọgide na-enwe chọrọ.
3. Nsogbu na web ahịa
The web ahịa ndị bara uru n'ihi ndị chọrọ ka ịnweta Spotify ọrụ na ha desktop na Mac. Ma ebe ọ bụ na weebụ ahịa bụ 3rd otu software na nyere ohere ka Spotify nchekwa data ha na-doro nsogbu na irregularity nke ọrụ. Ụfọdụ nsogbu dị ka faịlụ ahụghị, efu listi ọkpụkpọ, unsatisfactory music àgwà na ndị ọzọ. Ọrụ na-atụ aro iji atụ aro na ukara web ahịa n'ihi na iwu ọrụ na adịchaghị mma ngwaahịa. Ụfọdụ web ahịa nwere kwụsịrị ọrụ ha, mgbe ụfọdụ na-enweghị ike jikwaa ina.
Ọzọkwa, ọrụ na-atụ aro na ịdenye aha maka ahụ ike internet njikọ maka ezi àgwà gụgharia na mma ọrụ. Na ụfọdụ kọrọ ngwọta na weebụ ahịa bụ bụzi ihe mgbe ochie, ha anọkwaghị dakọtara na ọhụrụ software (Spotify ma ọ bụ na sistemụ). Hụ na gị na version a na-emelite na dakọtara ngwaọrụ gị nwere continuity nke ọrụ.
4. nsogbu na Spotify ná mba ọzọ
Spotify awade mpaghara ụfọdụ ọrụ. Nke a pụtara ọrụ nke onye ala nwere ike ọ gaghị enwe ike iji ụfọdụ ọrụ na ndị ọzọ na ala. Spotify njikọ a mpaghara kpọmkwem adreesị IP na akaụntụ gị na Ya mere ọ bụrụ na dịgasị, na-egosi na ị bụ ná mba ọzọ na otú ahụ ka free ọrụ nwere ike iji a kacha nke 14 ụbọchị nke Spotify ọrụ na kwa na na mmachi ojiji. Ị chọrọ ịgbanwe ị ugbu a ebe ke ọnọdụ ka ịnweta Spotify na akaụntụ gị mgbe njem. Ọzọkwa iji nọgide na-eje ozi mgbe 14 ụbọchị onye ọrụ kwesịrị nbanye na akaụntụ si ala mpaghara. Ọ bụrụ na ị bụ onye na adịchaghị onye ọrụ iji Spotify ná mba ọzọ dị ka a nrọ. Ị nwere ike iji Spotify site na ụfọdụ hack. Ihe ngwọta kasị mma maka nke a ga-abụ Okwey ọrụ. Nke a ga-ike gị mebere njirimara na ala mpaghara ma ị nwere ike nọgide na-eji Spotify dị ka na mbụ na-enwe gị music ná mba ọzọ.
Ndị a bụ ole na ole nsogbu chere ihu site ọrụ on Spotify. Ma e nwere mgbe nile ndozi nke mere na ndị a ga-egbo. Ị nwere ike ejikọta Spotify nkwado na-esi gị nsogbu resoleved dị ka mma.
> Resource> Spotify> Spotify Banye Issues